के सानो बिज सोशल मिडिया परिवर्तन भएको छ? | Martech Zone
सोमवार, मे 16, 2011 सोमवार, मे 16, 2011 लोरेन बल
पछिल्लो गर्मीमा हामीले साना व्यवसाय मालिकहरू कसरी सोच्दछन् कि उनीहरूले कसरी सोशल मिडिया प्रयोग गरिरहेछन्। परिणामaमा कागजात गरिएको थियो सेतो कागजातको श्रृंखला।
पछिल्लो वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ। मेरो धारणा के छ भने अधिक व्यवसायहरू कहिले पनि सोशल मिडियामा संलग्न छन्, वा कम्तिमा पानीको परीक्षणको लागि। यो त्यो केस हो, यससँग शीर्षकलाई पुनःभेट ​​गर्न राम्रो समय जस्तो देखिन्छ अर्को अध्ययन
यहाँ केही थिए २०१० सानो व्यवसाय सामाजिक मीडिया अध्ययन परिणाम:
यदि साना व्यवसाय मालिकहरूले सोशल मीडिया प्रयोग गर्दैछन् भने तिनीहरू प्रक्रियामा समयबद्ध गर्दैछन्,% 64% उनीहरू दर्शाउँदै एक दिन minutes० मिनेट भन्दा बढि सोशल मिडियामा खर्च गर्दछ। त्यसोभए उनीहरू कहाँ ह्या hanging आउट गर्दै छन्? फेसबुक, लिंक्डइन र ट्वीटर सबै सामान्य थियो, उत्तरदाताहरूको // with ले उनीहरूले तिनैमा प्रोफाइल रहेको बताएका थिए। सबै भन्दा साधारण - लिंक्डइनमा प्रोफाईलहरू फेसबुकमा ट्विटरको साथ नजिकै प्रोफाईलहरू मात्र सामिल भयो।
जब उनीहरूलाई को हो भनेर सोध्नुभयो प्राथमिक नेटवर्क, फेसबुक शीर्ष चार्टहरू देखेर म छक्क परेन। लगभग आधा उत्तरदाताले भने कि फेसबुक उनीहरूको प्राथमिक नेटवर्क हो। सरल प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस, ब्यापारबाट व्यक्तिगतमा अगाडि र पछाडि संक्रमण गर्न सजिलो बनाउँदछ। र वास्तविक संसारमा साना व्यवसाय मालिकहरूले नियमित आधारमा त्यसो गर्छन्
सर्वेक्षण पूरा गर्न यसले केहि मिनेट लिन सक्दछ। प्रतिक्रियाहरू आउन थाले पछि हामी यहाँ केहि परिणामहरू प्रकाशित गर्नेछौं!
नतीजा आउन सुरू हुन थालेको छ र सबैभन्दा फरक देखिने भिन्नता भनेको साना व्यवसाय मालिकहरूले सोशल मीडियामा खर्च गरेको समयको मात्रा हो। एक बर्ष पहिले उत्तरदाताहरूको विशाल बहुमतले दिनमा एक घण्टा भन्दा कम समय बिताइरहेको थियो। यस बर्ष सोशल मिडियामा बढी समयतर्फ स्पष्ट परिवर्तन आएको छ। के यसले भुक्तानी गरिरहेको छ? अधिक अद्यावधिकहरूका लागि हेर्नुहोस् परिणामहरू ट्रिक गर्न जारी छन्।
पृष्ठरेखा: ड्र्याग र ड्रप WordPress WordPress थिमिंग